Hagitaan iyo taageero ka timaada kooxaha kale | DO
Hagitaan iyo taageero ka timaada kooxaha kale /
Haddii takoorid laguu geysto waxaad xitaa la xiriiri kartaa xafiis la dagaallan takoorid ama urur shaqaale. Waxaad sidoo kale toos ula xiriiri kartaa maxkamad. Halkan waxaannu si kooban ugu tilmaameynaa laacibiinta kala duduwan.
Xafiisyada la dagaallanka takooridda
Waxaa qeybaha kala duduwan ee Swiidhan ka jira 18 xafiis oo takooridda la dagaallama oo maxalli ah. Xafiisyada la dagaallama takooriddu waa ururro sama fal ah oo madax bannaan oo kaa caawin kara arrimaha takooridda taabanaya, arrimo kala duduwanna kaa siin kara caawimaad xagga sharciga ah oo lacag la'aan ah.
ADB Swiidhan (ADB i Sverige)
Haddii aad urur shaqaale xubin ka tahay, oo aad u aragtay in shaqada laguugu takooray halkaas ayaad marka hore la xiriireysaa. Ururrada shaqaaluhu iyaga ayaa arrimaha takooridda iyo arrimaha ku aaddan eexda ee la xiriira fasaxa waalidnimada ku meteli kara xubnihiisa. Waxay sidoo kale siin karaan talooyin iyo taageero.
In arrin maxkamad lala koro
Waxaad sidoo kale maxkamadda derejada kowaad u gudbin kartaa codsi maxkamadeyn. Waxaa loogu yeeraa in maxkamad leysla koro, waxay ka dhigantahay in maxkamadda la weydiisto in ay go'aan ka gaarto in ay takooridu dhacday iyo in kale. Halkan waxaannu ku tilmaameynaa cidda aad la xiriireysid ama la xiriiri kartid haddii aad cid maxkamad la koreysid.
Macluumaad maxkamadaha ku aaddan iyo in cid maxkamad lala koro
Macluumaad ku aaddan sida uu qofka naftirkiisu maxkamad cid ula kori karyo, kharashaadka ay taasi ka dhigantahay waxaa laga heli karaa barta intarneetka ee Maxkamadaha Swiidhan. Xitaa xafiisyada gar yaqaannada- ama abuukaatayaashu warbixin wey kaa siin karaan sida ay wax u dhacayaan.
Maxkamadaha Swiidhan (Sveriges domstolar)
Xafiis gar yaqaan- ama abuukaate
Haddii aad dooneysid in aad caawimaad xagga sharciga ah wakiil ka heshid si aad arrinkaaga maxkamad ula kortid waxaad la xiriiri kartaa xafiis gar yaqaan ama abuukaate. Macluumaad abuukaatayaal kala duduwan ku aaddan waxaad ka heleysaa barta intarneetka ee Ururka abuukaatayaasha.
Abuukaate ka raadso barta intarneetka ee Ururka abuukaatayaasha
(Sök advokat på Advokatsamfundets webbplats)
Haddii aad u baahantihid taageero dhaqaale si aad u adeegsatid wakiil xagga caddaaladda ah, waxa loogu yeero badbaadada xagga caddaaladda ee ceymiskaaga guriga ama nidaamka caawinta xagga caddaaladda ayaa mararka qaarkood taageero ku siin kara. Si aad macluumaad dheeraad ah u heshid waxaad la xiriiri kartaa shirkaddaada ceymiska ama Hey'adda caawimaadda caddaaladda ama labadoodaba.
Hey'adda caawimaadda caddaaladda (Rättshjälpsmyndigheten)